कोरोना भाइरसको विरुद्धको खोपका लागि अब कहिलेसम्म पर्खनुपर्नेछ ? – Namaste Dainik
August 29, 2020 NamastedainikLeaveaComment on कोरोना भाइरसको विरुद्धको खोपका लागि अब कहिलेसम्म पर्खनुपर्नेछ ?
काठमाडौं- कोरोना नेपालसम्म आइपुग्दैन ।’, ‘नेपालीको प्रतिरक्षा क्षमताले सजिलै कोरोना भाइरसलाई जित्नेछ ।’, ‘कोरोना लागेमा तातो पानी र बेसार खाएमा निको हुन्छ ।’ यस्ता यस्तै मनगढन्ते हल्ला फैलिरहँदा धेरैलाई लागेको थियो, कोरोनाले अब केही गर्दैन । तर, अहिले स्थिति फरक छ । कोरोनाले सर्वत्र भय र आतंक पैदा गरेको छ । कोरोना संक्रमणको दर र मृत्यु दरसमेत अनियन्त्रित ढंगले बढ्दो मात्रामा छ । यस्तो अवस्थामा धेरैका लागि चासो र सरोकार बनेको छ, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ।
आखिर कहिले यो खोप तयार हुन्छ ? हामीकहाँ कहिले व्यवहारिक प्रयोगमा आउँछ ? यसै सन्दर्भमा बिबिसीले एउटा रिपोर्ट प्रकासित गरेको छ, कोरोना भाइरसको खोपका लागि अब विश्वले कहिलेसम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ ?
केही समयअघि रुसले कोरोना भाइरस बिरुद्ध खोप तयार गरेको व्यापक चर्चा भएको थियो । उक्त खोपको नाम स्पुतनिक ५ राखिएको छ । स्पुतनिकको अर्थ स्याटलाइट हुदो रहेछ । सोभियत युनियनले सन् १९५७ मा विश्वको पहिलो स्याटलाइट बनाएको थियो, जसको नाम स्पुतनिक राखिएको थियो । अतः जसरी अन्तरिक्षको दौडमा उछिनेको थियो, त्यसैगरी कोरोना भाइरस बिरुद्धको खोपमा पनि अग्रपंक्तिको दौडमा आफुलाई प्रमाणित गर्न रुसले खोपको नाम स्पुतनिक ५ राखेको हो ।
बिबिसीको रिपोर्ट अनुसार उक्त खोप रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकी छोरीलाई दिइएको थियो, जो अहिले पूर्णत निको भएकी छिन् ।
यद्यपि पुटिनले खोपका सम्बन्धमा जुन दाबी गरेका छन्, त्यसमा वैज्ञानिकहरु भने विश्वस्त छैनन् । रुसले उक्त खोप करिब ७६ जनामा प्रयोग गरेको बताएको छ । रुसको यो खोपलाई सबै मुलुकले सहज रुपमा स्विकार गर्ने स्थिति भने देखिएको छैन । किनभने विश्वको थुप्रै मुलुक अहिले यस भाइरस बिरुद्ध खोप बनाउने कार्यमै जुटिरहेका छन् ।
त्यसो त अहिले वैज्ञानिकहरुले कोरोना भाइरस बिरुद्धको खोप चाडै बन्ने बताइरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार सन् २०२० को अन्तिममा वा २०२१ को सुरुवातीमै कोरोना भाइरसको खोप तयार भइसक्नेछ ।
कोरोना महामारीलाई काबुमा राख्नका लागि विश्वभरका रिसर्च इन्स्टिच्युट र फर्मास्यूटिकल कम्पनी खोप निर्माणमा तिब्रतासाथ जुटिरहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार चीनका तीन, अमेरिकाका दुई र बेलायतका एक खोप परीक्षणको अन्तिम चरणमा छ । यसमा तीन अलग टेक्नोलोजी प्लेटफर्म प्रयोग भइरहेको बताइन्छ । बिबिसी रिपोर्ट अनुसार बेलायतमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र ग्लोबल ड्रग्स फर्मा एस्टरजेनले मिलेर खोप बनाइरहेको छ, त्यसमा कोरोना भाइरसँग मिल्दोजुल्दो भाइरस प्रयोग गरिएको छ । अमेरिककाको औषधि कम्पनीले जुन खोपमा काम गरिरहेको छ, त्यसमा जेनेटिक म्याटेरियलको मद्दतले स्पाइक प्रोटिन तयार गरिनेछ । त्यसैगरी चीनमा सायनोवेक बायोटेक नामक औषधि कम्पनीले काम गरिरहेको छ, जसले उपचारका लागि भाइरसलाई नै प्रयोग गरिरहेको छ । यी सबै खोपको सुरक्षा र इम्युन रेस्पोन्स थाहा पाउनका लागि अपेक्षाकृत कम व्यक्तिमाथि परीक्षण भइसकेको छ । अब यी खोपहरुलाई तेस्रो चरणको प्रयोग गरिनेछ ।
अघिल्लो दिन अस्पताल संग गोहार माग्दै एक एक अस्पताल डुलाउँदा रात बित्यो, अर्को दिन कोशीमा पुग्नासाथ प्राण गयो।
June 30, 2020 July 20, 2020 Namastedainik
चिकित्सकहरु भन्छन्– यो सरकारको भर नपर्नुहोला, आफै सावधानी अपनाउनुस्, जोखिम बढ्दैछ।